Nigeria, Cameroon Iyo Algeria Oo Ka Hadhaya Koobka Adduunka
HomeWararka MaantaNigeria, Cameroon Iyo Algeria Oo Ka Hadhaya Koobka Adduunka
Xulka kubadda cagta Nigeria ayaa 3-0 ku dhirbaaxay Algeria oo ku soo booqatay waddankeeda, ciyaar ka tirsanayd isreeb-reebka Koobka Adduunka ee 2018 lagu qaban doono Russia, kaas oo qaramada Afrika ay ku tartamayaan shantii waddan ee uga qayb-geli lahaa.
Ciyaartan oo in badan la sii saadaaliyey, ayaa waxa bilowgii ciyaartaba dardar garoonka la soo galay wiilasha Nigeria oo sameeyey fursado badan, laakiin Algeria ayaan iyaduna ka liidanin oo khasaariyey fursado badan oo u suurtogelin lahaa in gellin horeba ay ciyaarta guusheeda gacanta ku dhigaan.
Goolka koowaad, waxa Nigeria u saxeexay laacibka afka hore uga ciyaara Chelsea ee Victor Moses oo inta uu xarfad iyo orod ku dawakhiyey difaaca Algeria si fiican goolka ugu hubsaday kubadda, goolka labaad oo u muuqday offside na waxa kaligii isagoo ah shabaqa ku ruxay kabtanka Nigeria Mikel Obi.
Qaybta hore ayey labada kooxood ku kala nasteen 2-0, laakiin markii laysugu soo noqday qaybta dambe, ayey mar kale wiilasha Algeria halkii ka sii wadeen khasaarinta fursadaha ay helaan, laakiin Nabil oo ka mid ahaa xiddigaha ugu khasaarinta badan fursadaha ay helaan ayaa ciyaarta ka dhigay 2-1, ka hor intii aanu Moses mar kale ku ceshanin dhalinta goolasha ciyaartana ka dhigin 3-1 ay guushu ku raacday Nigeria.
Labadan xul oo ku jira Group B, waxa ku wehelinaya Cameroon iyo Zambia oo ku kala baxay barbar dhac 1-1.
Waxa hoggaanka Groupkan haya, Nigera oo leh 6 dhibcood, Cameroon oo ku soo xigta ayaa leh 2, halka Algeria iyo Zambia ay leeyihiin min 1 dhibic.
Sida sharcigu yahay, Groupkan waxa looga baahan yahay hal waddan in uu ka soo baxo, taas oo ka dhigan in marka la dafiro awoodda Zambia, saddexda waddan ee kale ee Nigeria, Algeria iyo Cameroon uu midkood ka qayb-geli doono Koobka Adduunka halka labada kalena ay shaashadaha ka daawan doonaan. Si kale haddii loo dhigo, Zambia oo noqoto kooxda ugu dhibcaha badan hormadan, waxay sababaysaa in Koobka Adduunka ay ka hadhaan Nigeria, Algeria iyo Cameroon.
Halkan ka daawo goolashii:
Xulka Sierra Leone Oo Loo Diiday Inay Gallaan Jasiirada Seychelles Cabsida Xanuunka Ebola Darteed